Ndeipi Yakanakisa B2C CRM Yako Bhizinesi Ridiki? | Martech Zone
Monday, May 4, 2020 Chipiri, May 5, 2020 Daniela McVicker
Hukama hwevatengi vauya nenzira yakareba kubva pakutanga kwavo. Iyo B2C (Bhizinesi kune Mutengi) mafungiro akachinjira kune yakawanda UX-centric kufunga pane kuendesa kwese kwechigadzirwa chekupedzisira. Kusarudza rakakodzera mutengi kudyidzana manejimendi software kune rako bhizinesi kunogona kunetsa.
Zvinoenderana nezvidzidzo, 87% emabhizinesi anoshandisa makore-based CRMs achishingairira.
18 CRM Statistics Unofanirwa Kuziva ye2020 (uye Beyond)
Uine plethora yesarudzo dzauinadzo, zvinogona kukuremedza uye kunetsa kusarudza iyo chaiyo. Ngatitorei mimwe mienzaniso inokosha uye kuti ungasarudza sei chishandiso chakakodzera chebhizimusi rako diki 'zvinodiwa.
Maitiro Ekusarudza CRM
Tisati tapinda mairi, zvakakosha kuseta imwe nzira mumatombo. Chekutanga pane zvese, hapana maviri maCRM maturusi akafanana - yega yega ine yayo seti yesarudzo.
Kusarudza kurudyi kunowanzoitwa kuburikidza nekuzviratidza kubva padivi rekambani, kunyanya nezve izvo zvaunoda. Nepo mamwe makambani achiisa pamberi pekutengesa, vamwe vanosarudza zvakanyanya kuteedzera uye kuongorora. Iyo chaiyo CRM ichave zvakare neakanaka maitiro pane yako zvemukati kushambadzira zano, zvichikugonesa iwe kuti uone kuti ndeupi mhando yezvinyorwa inogadzira yakawanda inotungamira. Ngatitarisei mimwe mibvunzo inogona kukubatsira kuti uone CRM yakakwana yebhizinesi rako:
Kukura kwebhizinesi rako
Bhizinesi rako rakakura zvakadii?
Iwe unoshanda pasirese here kana mudzimba?
Une vashandi vangani uye uri kuwedzera?
Yakawanda sei data iwe yaunogadzirisa zuva nezuva uye iri kuwedzera?
Hunyanzvi hwekuita bhizinesi rako
Ndedzipi mhando dzehunyanzvi dzauinadzo pamubhadharo wako?
Iwe unayo vaongorori ve data uye vatengesi varipo?
Ko automated yako mutengi kutsigira uye kutengesa maitiro?
Izvo zvakakosha zvebhizinesi rako
Ndezvipi zvaunokoshesa kana zvasvika kune kugutsikana kwevatengi?
Marii yaunodyara mukushambadzira uye kushambadza?
Kufamba kwako kwekufambisa kwakarongeka sei uye kune chero zvipingamupinyi?
55% yevaridzi vebhizinesi vanokumbira kurerukirwa kwekushandisa muCRM yavo pamusoro pezvose.
12 Anoshamisa CRM Machati Ausingade Kupotsa
Paunenge uchinge wapindura iyi yese mibvunzo, iwe unenge uine yakajeka uye yakajeka chinangwa mufananidzo wezvauri zvaunoda. Zviri nyore kuverenga zvisirizvo uye sarudza CRM isingakuteedzere, kungodzosera kune imwe yakazotevera. Zvino isu tave nekunzwisisa kwakajeka kwekusarudza chaiyo CRM, ngatitarise iyo mienzaniso inonyanya kuzivikanwa.
Kana iwe uri kutsvaga yakanaka manejimendi uye kuronga CRM, Agile CRM yawakafukidzira iwe. Chishandiso chinodadisa plethora yeotomesh uye sarudzo dzekubata manejimendi dzinogona kudzora manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi.
Iyo yaive yakanyatsogadzirirwa nemabhizimusi madiki mupfungwa uye haina mamwe mabhizimusi makuru sarudzo iwe aungawanzo kuwana muCCRM. Nekudaro, Agile CRM inouya nerutsigiro ruzere rwema plugins nemajeti izvo zvinoreva kuti unogona kuzviita kuti zvikwanise bhizinesi rako 'zvinodiwa zvakakwana.
Shanyira Agile CRM
Kana iwe uchitsvaga yekutengesa-centric CRM yebhizinesi rako, usatarise kupfuura Pipedrive. Iyo sevhisi yakanyatso gadzirirwa nekutengesa kufefetera pakati, zvichireva kuti inouya yakazara nevanhu vazhinji vevatengesi-akasarudzika sarudzo.
Iyo yakapusa interface dhizaini uye yekudhonza-uye-kudonhedza UI inoona kuti timu yako ine inokurumidza uye yakavimbika chikuva chekushanda nayo. Pipedrive inotobvumidza kusangana kweemail zvinoreva kuti timu yako yekutengesa haifanirwe kuita multitask nematebhu akasiyana uye ingo tarisa pakuita basa ravo.
Mhangura (nenzira Prosperworks) ndeye CRM ine yakazara Google suite kusangana. Izvi zvinoreva kuti sevhisi inoenderana neese maapplication uye maturusi anowanikwa paGoogle, kusanganisira Dhiraivha, Mapepa, uye maDoc.
Chii chinopatsanura Mhangura kubva kune mamwe maCRM kuenderana kweVoIP iyo inouya yakabatanidzwa mukushandira.
Amari Mellor, Mumiriri weVatengi Vemutengi Mumiriri we Ngwarira
Izvi zvinobvumidza mamaneja ako ekutengesa uye rutsigiro rwevatengi kuti vapindirane nevanofona uye nevechitatu vasina kubuda chishandiso icho pachacho. Iyo inorekodha uye inochengetera manzwi ezvekuongorora kwekupedzisira uye inokutendera iwe kuti uchengete uye nekugadzirisa yakakosha data yakatwasuka kuburikidza neGoogle pachayo. Mhangura ndeimwe yemamwe maficha-akazara maCRM kunze uko uye akaenzana akakodzera kumabhizimusi madiki mazhinji achitsvaga isingagumi CRM mhinduro.
Sezvo iri CRM inodhura kwazvo pamusika, HubSpot inorarama kusvika kune hype. Iyi ndiyo de facto sarudzo yekutanga uye emabhizinesi madiki ane ekushomeka mabhajeti. Iyo inobvumidza kuzere kwevatengi manejimendi uye kuongororwa kwedata, pamwe nekubatanidzwa kweGmail mukati meCRM. Kupfuura zvese, HubSpot inogadzirisa mitengo maererano nesarudzo dzaunoshandisa uye pasuru yaunosarudza.
Izvo zvishoma zvinhu zvaunoshandisa zvinoshingairira, zvishoma iwe zvauchazobhadhara pakupera kwemwedzi. HubSpot ipuratifomu yakakura yekutevera kwedatha uye manejimendi manejimendi pasina chero epamberi sarudzo dziripo. Nekudaro, uku kuderera kudiki, nekuti mazhinji epamberi ekutevera uye ongororo sarudzo zvingangodaro zvisina basa kumabhizimusi madiki uye ari kukura.
Kana kurambidzwa kune vashandisi gumi kusaratidza kuve nyaya kwauri, saka Zoho inogona kunge iri CRM yakakwana yebhizinesi rako. Zoho ndeye yemahara CRM ine musimboti mashandiro ema CRMs epamberi. Iyo inobvumidza manejimendi manejimendi, kuongorora uye kutsigira kuburikidza neiri-pabasa UI.
Zoho inogadzirwa nevatengesi mupfungwa uye inoratidzira kugona kwehunyanzvi. Izvi zvinoreva kuti rako rekutengesa timu rinogona kugadzira yemakwikwi mamiriro mukutanga uye kushandira kuvandudzwa kweumwe neumwe. Zoho inopa zvakanyanya kufambira mberi kugona uye yakawedzerwa mushandisi rosta pamubhadharo mudiki wemwedzi. Nekudaro, mazhinji mabhizinesi madiki uye ekutanga anowana akawanda eanoshanda uye mashandiro mune yemahara vhezheni zvakare.
Chekupedzisira, kana manejimendi manejimendi uye kuteedzera kwevatengi kuri chimwe chinhu chaunonyatsoda, Highrise ichavhara icho chako. Iyo sevhisi yakavakwa neyegore-yakavakirwa dhata yekuchengetera mupfungwa, zvichireva kuti kusangana kwevatengi vese kwakachengetedzwa zvakachengeteka paCRM.
Highrise inoshanda zvakanyanya nenzira imwecheteyo seyezvishandiso manejimendi manejimendi uye emabhuku ekunyorera, asi iine CRM twist. Izvi zvinoreva kuti iyo interface yakachena uye iri nyore kusvika pakubata nayo. Iwe unogona kunyange kubata ako email zvinyorwa uye nekuendesa mameseji kune ako vatengi kuburikidza neHighrise pasina kushandisa kune automation masevhisi. Kana iwe uchitsvaga manejimendi manejimendi uye chekutevera chishandiso chebhizimusi rako, usatarise mberi kupfuura Highrise.
Yako CRM ndeyeVako Vatengi
Funga nezvevatengi vako nekubatana kwako pamwe paunosarudza yako CRM software. Ndeapi matambudziko auri kusangana nawo izvozvi uye aungade kudzikisira? Uyu mubvunzo wakapusa dzimwe nguva unogona kunge uri iwo wekutanga danho raunoda kuisa mune CRM mhinduro.
74% yevashandisi veCRM vakati ivo vaive neruzivo rwakadzama rwevatengi data mushure mekudyara muCRM.
CRM Software MushandisiView
Iko hakuna kudikanwa kwekuita nemaoko kuitisa kwevatengi manejimendi neakawanda akawanda maficha-akazara uye anodhura mhinduro kunze uko. Tora kusvetuka kwekutenda uye edza chishandiso chitsva kuti uone kana ichienderana nebasa rako riripo. Iwe unogona kungoshamiswa nezvakabuda.
Tags: agile crmbhizinesi kumutengiBusiness2ConsumerMhanguraCRMGmailgoogle suiteHighrisesei kutisei kusarudza crm
Daniela McVicker blogger uye munyori wekuzvimiririra uyo anoshanda padhuze neB2B uye B2C mabhizinesi anopa blog kunyora, kunyora, uye ghostwriting services. Parizvino, iye anobatsira ku Topwriters. Kana Daniela asiri kunyora, anofarira kufamba, kuverenga zverudo uye sainzi ngano, uye kuyedza waini nyowani.